Amisom oo cadeysay cidda ay la jirto DF iyo madaxda maamul goboleedyada!! - Caasimada Online
Home Warar Amisom oo cadeysay cidda ay la jirto DF iyo madaxda maamul goboleedyada!!
Amisom oo cadeysay cidda ay la jirto DF iyo madaxda maamul goboleedyada!!
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxda howgalka AMISOM ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka sii xoogeysanayo ee ka dhaxeeyo dowladda dhexe iyo madaxda Maamul Goboleedyada kaasoo ka dhashay muranka u dhaxeeyo dowladaha Carabta ee keenay in xiriirka loo jaro dowladda Qatar.
Simon Mulongo, oo ah ku xigeenka wakiilka midowga afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa si cad uga hor yimid Madaxda Maamul Goboleedyada isla markaasna taageeri u muujiyey dowladda dhexe.
Simon Mulongo, ayaa difaacay dowlada Soomaaliya, isagoo sheegay in madaxda maamulada ay ku qaldan yihiin inay dhinac kala saftaan xiisada khaliijka.
“Hadda ciidamada Soomaaliya tababaraan Turkiga, Mareykanka iyo Ingiriiska, kuwaasoo soo saaray 800 askari, iyadoo loo baahan yahay 50,000 oo askar si ay AMISOM ugala wareegay mas’uuliyadda amniga dalka,” ayuu hadalkiisa raaciyay Simon.
Dowldda dhexe iyo madaxda Maamul Goboleedyada ayaa la filayaa inay Berri Magaalada Baydhabo ku yeeshaan shirka golaha Amniga, waxaana la rajeenayaa in shirkaas ay qolo kasta kusoo bandhigi doonto tabashadeeda.
Sidoo kale Waxaa dhamaadka Bishan June ka furmaya magaalada Brussels ee dalka Belgium shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, waxaa ka qeyb galaya Wafdi ay hoggaaminayaan Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, ka hor shirkaas waxaa shirar loogu gogol xaarayo ay ka dhici doonaan Muqdisho.
Tan iyo markii uu bilowday Khilaafka dowladaha Khaliijka wuxuu saameyn xoog leh ku yeeshay dowladda Soomaaliya, iyadoo ay Imaaraadka Carabta dagaal toos ah ku bilowday dowladda dhexe iyadoo adeegsaneyso madaxda Maamul Goboleedyada.